Gochi Minilik sanyii isaa fi Gantuuwwan Oromoo warra Hakka OPDO har’a wajjiin ilmaan Oromoota irratti rawate yoomiyyuu gocha ilmaan Oromoo hin uranfanneedha! - Oromia Shall be Free
Gochi Minilik sanyii isaa fi Gantuuwwan Oromoo warra Hakka OPDO har’a wajjiin ilmaan Oromoota irratti rawate yoomiyyuu gocha ilmaan Oromoo hin uranfanneedha!
Gochi Minilik sanyii isaa fi Gantuuwwan Oromoo warra Hakka OPDO har’a wajjiin ilmaan Oromoota irratti rawate yoomiyyuu gocha ilmaan Oromoo hin uranfanneedha! yeroo yerooti gocha sammuu ilmaan Oromoota ykn lammiiwwaan keenya keessa jiruudha! Imayyuu ilmaan Oromoota bira taree inni jaarraa 100 dura Oromiyaa keessaa naannoolee Arsiiti fi Harargeeti Abboota keenya irraa harka murun Haadhoolee teenya irraa harma ciruun rawatamee fi akkasumalee ilmaan Oromoo akka harree du’eeti lafarra harkiifamanii warabeessaan nyaachifaman Addunyaanu ni beekti!
Kunii osoo jiruu har’allee ilmaan naafxaanyaa ykn Qomata faruu abbaa isheetin farfaatu fi gochaallee inni kaleessaa gantuuwwaan Oromoo gargaarsifatee ilmaan Oromoo irratti rawachaatin ture jaarraa 21 keesa nutti mul’iisuuf sosochotii!!
wooowwwwww tasumallee hin dandamuu sirni kaleessaa deebi’uun
Hafeetin jira inni akka kaleessa dhiiga ilmaan Oromootin buukoo bukeefachuun lafee ilmaan Oromootin mana ijaraachuun Qoteebultoota Oromoo lafa isaa irraa kasanii abbaa qabeechaatti gurguurachuun ilmaan Oromoo biyyuma Abbaa isaa keessatti baqataa tasisuun hin jiruu walitoota Oromoo maaf waa’ee Oromoo sirbita jedhani hiidhun dhabatee! Oromiyaan hin qoqodamtuu ammaan booda!!
ani jechi abasha jedhu kun baayyee tokko naaf hin gallee dhugaa sanyiin isaani uumama sanyii namatin addaa dhugaa maliif yoo jettaan ilmoon nama namni nama tahuu qofaaf kabajaa guddaa naaf qaba!! isanaan gaaruu ilmoo nama akka biratti ilaalu! keessatu nuti ilmaan Oromoo akka addatti nu ilaalu!! garuu maaf akkanatti nu tuffatu???? akkasumalee maaf nu jibbuu beektumee lammiwwaan koo naaf ibsa????
mee akka yaada kooti Oromoon Fadaf eddoo ol aana keenna akkasumalee ni jaalataa fardumatu waan jaalataniidha! hin agarree yeroo waraana keessatti yoo abbaan irraa ajjeefamee irra dhabateetin hiimimsaa!!! bira hin deemu kanaafuu waamalee Farda hin yaadannee guyyaa tokkoo jarsa naannoo ani itti dhaladhee tokkotu waa’ee Fardati fi Gangee naaf himaan Jarsi kun yeroo baayyee osoo Gangeen tirtuu Farda yaabachuu guddiissuu kanaafuu gafiin gafadhee gafiin kootis isa akkana jedhuudha yeroo hunda abboo maaf Farda qofa yaabatu ishee tana (Gangee ) maaf hin yaabannee jedhenii gafaadhe achumaan ilmaa koo Fardi yeroo namni yaabatetin deemu sammuu isaa keessati waan gaarii namaaf yaada deema!! har’a nagayan nama kana eddoo inni barbaadu geesseetin manatin deebi’a jechaatin deema naan jedhaan
Gangeen gaaruu akkanamitti yeroo namni yaabateetin deemu sammuu ishee keessatti wannii isheen yaadatin deemtu nama kana eessatti kuufitee lafati isa dhiite ajeesa jechaatin deemti naan jedhanii na gorsaan anillee gorsi isaani Oromoon kanaaf Farda jaalataa jechuudhan irraa fudhee!! Rabbiin nama gorsa Abboota keenya irraa fudhatuu nu godhu!
Yaa lammiiwwaan koo Sammuun ummaata abasha ( sanyii qomata) isa Gangeetin tokkodha jedhetiin yaada isaan jechuma takkiitti OROMOO jedhu kana humna itti dhabanmalee Addunyama tana irraa dhabamsiisuu yaadu WALLAAHI BILLAAHI 100%
baruma 2014 kana keessaa mee maal hojataa jiruu Abashoonnii Ykn Mootummaan Abbaa irredha???
Oromoon bara kana keessa uf hin beekne ykn hirriba irraa hin kanee ima rafi asii achii wannii si kaasu tokkollee ni jira jeedhetin hin yaadu dhugaa waaqaa
Dhamsa koo maaloo yaa lammiwwaan koo yeroon amantaa kutaa gandaa fi sayiin wal qoqodan dabartee jirti nuti ilmaan Oromoota inni Harargee Arsii Baalee walaggaa Shawaa Jimmaa Iluu Abbaa Booraa Gujii Booranaa fi Walloon keessaatti dhaallee hundinuu ilmaan abbaa tokkoti walirratti diina hin tanuu diini keenya abashoota kanaafuu Tokko taheetoo diina Keenya dura haa dhabanuu Oromiyaa teenya haa deefannuu gumaa Gotoota keenya haa kaafalannuu!!
Tokkummaa yaa lammiwwaan koo Tokkummaa jabeesssaa!!
Previous Full confidence from oromo students!!!!
Next “Habesha” is really big evil